Home News DEG DEG; Banaanbaxyo rabshado wato oo markale ka bilawday Magaalada Baydhabo
DEG DEG; Banaanbaxyo rabshado wato oo markale ka bilawday Magaalada Baydhabo
Wararka Naga soo gaaraya Magaalada Baydhabo ee Gobalka bay ayaa waxaa ay sheegayaan in Saakay uu banaan bax rabshado wato uuka bilowday magaaladaasi.
Banaanbaxa ayaa waxaa looga horjeedaa xarigii loo geystay Musharax Mukhtaar Roobow Cali.
Ciidamada booliska ayaa la sheegayaa in ay xakameynayaan dadka banaanbaxa ka dhigaya bartamaha Magaalada Baydhabo ee Gobalka Bay.
Bananbaxa ayaa waxaa uu ku soo beegamayaa kadib markii Ciidamada Itoobiya ay Baydhabo ku soo xireen Mukhtaar Roobow.
Xaalada ayaa weli kacsan, waxaana laga cabsi qabaa in dagaal uu ka dhaco Magaalada Baydhabo.
Jahwareer iyo qas ayaa ka taagan Magaalada Baydhabo ee Gobalka Bay.
Banaanbaxyadii ugu dambeeyay ayaa waxaa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, iyadoona ay xusid mudan in xildhibaan lagu dilay Magaalada Baydhabo.
Previous articleTaliska Ciidanka Amisom oo beeniyay iney ku lug leeyihiin soo qabashadii Muqtaar Roobow
Next article(Deg Deg) Ciidamo tiro badan oo Baydhabo lagu daadiyay & Isgaarsiinta oo laga jaray
C/wali Gaas oo Booqday Askartii lagu soo dhaawacay Tukaraq!!
Ilhan Omar’s Book Tells an Inspiring Story of Her Life but...